မြန်မာပြဇာတ် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မြန်မာပြဇာတ်. Show all posts
"ချစ်ချောနဲ့ ပွမ်ပွမ် တို့ရဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့ အမတ် ဟာသပြကွက်"
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပညာရေး ကွန်ရက် ၄ နှစ်ပြည့် ရန်ပုံငွေ ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ၊ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင် (ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်)
RFA မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
ကဏ္ဍ မြန်မာပြဇာတ်, ဟာသ
"MISS MYANMAR INTERNET" A NYEINT
"MISS MYANMAR INTERNET" A NYEINT - Part One
"MISS MYANMAR INTERNET" A NYEINT - Part Two
This is an exclusive video of "Miss Myanmar Internet" A Nyeint Performance, was held at the People Park in Yangon on June 1, 2014. Nang Khin Zay Yar (Miss Myanmar 2012) and Khin Wint Wah (Miss Supranational Myanmar 2013) performed for the Ticket-Free Public A Nyeint Show together with well-known comedians; Kyaw Htoo, Tain Nyunt, Watt Ma and others.
Visit : http://www.myanmarcelebrity­.com
From: Myanmar Celebrity - YouTube
ကဏ္ဍ မြန်မာပြဇာတ်, အငြိမ့်
မင်္ဂလာပါနော်...သည်နေ့ ကျနော် လိုင်းတွေ စုတ်နေတဲ့ ကြားထဲက... ကျနော် စုဆောင်း သိမ်းဆည်း ထား
တဲ့ ပြဇာတ် ဇာတ်လမ်း တိတ်ခွေခေတ်က အသံဖိုင်လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
ဒါကတော့ တိတ်ခွေလောကမှာ အရမ်း နာမည်ကြီး ကျော်ကြား ခဲ့တဲ့ ပြဇာတ် တပုဒ် ဗိုလ်အောင်ဒင် ဆိုတဲ့
မိတ်ဆွေများ အတွက် အစ အဆုံး လိုအပ်သော သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ခုလို အစ-အဆုံး ပြန်
လည် စုစည်း တင်ပေးလိုက် ပါတယ်နော်...။
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၁) က "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၁) ခ "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၂) က "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၂) ခ "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၃) က "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၃) ခ "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၄) က "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၄) ခ "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၅) က "
" ဗိုလ်အောင်ဒင် အပိုင်း(၅) ခ "
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, May 25, 2014 14 comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာပြဇာတ်, အသံဖိုင်
မန္တလေး အနုပညာ ပုံရိပ် ပွဲတော်
မန္တလေး အနုပညာ ပုံရိပ် ပွဲတော် မှ ဟာသ တစ်ခန်း လေးပါ။
ခေါင်းခါးချေလက် ဒီလေးချက် ကစပြီး ရယ်ပါတယ်။
မီးပျက်တာ ကစပြီး ပြီးတဲ့ အထိ ရယ်နေ ရတုံးဘဲ
ခဏလေး အချိန် ရရင် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ
မူရင်း အတိုင်း ယူကျု ပေါ်ကတတွေ့ လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။
From: DVB Burmese Video Channel - YouTube
လွှဲပေးမှာဖြင့် အဆင်ပြေအောင် လွှဲပေါ့
သီးလေးသီးရဲ့ ဟာသလေး တစ်ကွက်ပါ။
by Zay Yar - YouTube
"Junction 14th Anniversary with Charity" A Nyeint Show
This is the video of "Junction 14th Anniversary with Charity" variety concert, was held at the Junction Square Mall in Yangon on December 7, 2013. Well-known singers; Big Bag, Aung La, Eaint Chit and Ni Ni Khin Zaw performed together with disable youths who are enable to speak and hear. Actress Linn Zar Ni Zaw, Khine Thinn Kyi, Thet Mon Myint, Aye Myat Thu, Ei Chaw Po and Shwe Hmone Yati also performed as female comedians at the Junction's charity event.
by MC Page
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, December 10, 2013 No comments:
မင်းကျင့်တရာ၁၀ ပါး အကြောင်း
မင်းကျင့်တရာ၁၀ ပါး အကြောင်း SHARE ပါ ထိမိတယ်တဲ့ သူတို့ ပြောတော့သူတို့ စကားပါဘဲ။ ပြောချက်နဲ့ 
by kotun wai
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 04, 2013 No comments:
5 Stars အငြိမ့်ဆိုတဲ့ ယူကျုပေါ်က တွေ့တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်တခုပါ။
အလှူ ပွဲတခုမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ထားတာကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။
တချိန်က နာမည်ကြီး မခင်နှင်းဆီ ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုလည်း ခံစားနားဆင်ရမှာ ဖြစ်သလို အငြိမ့်ဆိုတဲ့
အရသာကို ခံစားရနိုင်တာမို့ ဒီစနေ တနင်္ဂနွေ နေ့များအတွက် အပန်း ပြေစေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်
The Irrawaddy's Blog by အိမ့်သံစဉ်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Saturday, August 24, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာပြဇာတ်, အငြိမ့်, ဖျော်ဖြေရေး
ဥပကနဲ့ မဆာဝါ ပြဇာတ်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, December 31, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, မြန်မာပြဇာတ်